Kaalmada guri ka saarida (Eviction Assistance) - RentinginSeattle | seattle.gov
Joojinta guri ka saarista COVID-19 ee Seattle waxay ku egtahay Febraayo 28, 2022.
Hel Caawin Hadda
Ilaalinta Gurya ka saarista, Mas'uuliyadaha, iyo Jawaabaha Guud ee Kiraystayaasha
Ilaalinta Gurya ka saarista, Mas'uuliyadaha, iyo Jawaabaha Guud ee Mulkiilayaasha
Maxay tani uga dhigan tahay kiraystayaasha, mulkiilayaasha, iyo maamulayaasha guryaha?
Sida ku cad hakinta, ka saarista waxay ku koobnayd xaaladaha ay jirto khatar ku wajahan caafimaadka iyo badbaadada. Marka dhamaato joojinta guri ka saarista, kireystayaasha waxay sii wadi doonaan inay helaan qaar ka mid ah ilaalinta ka saarista hoos oo faahfaahsan. Milkiilayaasha guryaha waxay awoodi doonaan inay sii wadaan guryo ka saarista qaarkood laakiin waa inay leeyihiin faham aasaasi ah oo ku saabsan habka. Mulkiilayaashu waa inay sidoo kale ogaadaan waxa la oggol yahay iyo waxa aan la oggolayn. Dawladda Magaalada Seattle iyo ururada aan faa'iido doonka ahayn waxay ka caawin karaan kiraystayaasha iyo mulkiilayaasha inay fahmaan xuquuqdooda, mas'uuliyadahooda, iyo agabyada la heli karo.
Qaar badan oo ka mid ah agabkan ayaa lagu heli karaa Ingiriisiga oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad wacdo oo aad codsato turjumaan.
Mashruuca Caddaaladda Guriyeynta (Housing Justice Project)
Caawimo sharci oo bilaash ah oo la siiyo kiraystayaasha wajaheysa in laga saaro degmada King.
Wac 2-1-1 si aad u hesho caawimo
Ku xidho adeegyada kaa caawin kara kaalmada kirada, hoyga, tixraaca sharciga, kaalmada guriyaynta, iyo qaar kaloo badan.
Barnaamijka Ka Hortagga Raritaanka ee Degmada King
Kaalmo u hel kirada iyo lacag bixinta tamarta COVID-19 dartood.
Ku laabo xagga sare
Ilaalinta Gurya ka saarista, Mas'uuliyadaha, iyo Jawaabaha Guud ee Kiraystayaasha iyo Mulkiilayaasha
Ilaalinta Dheeraadka ah
(Qaar badan oo ka mid ah illo warbixineedkan ayaa lagu heli karaa af ingiriis oo keliya.)
Seattle waxay siisaa ilaalin dheeraad ah oo ka saarida kireystayaasha u qalma ka dib marka joojinta joogsiga guri ka saarista uu dhaco. Tusaalooyinka qaar waa:
Awood la'aan la xiriirta COVID: waxay xaddidaysaa ka saarida kireystayaasha leh kirada xad-dhaafka ah ee ururtay inta u dhaxaysa Maarso 3, 2020 iyo ilaa 6 bilood ka dib dhamaadka joojinta guri ka saarista.
Ilaalinta Ka Saarida Sannad Dugsiyeedka: waxay xaddidaysaa ka saarida September ilaa Juun iyadoo lagu saleynayo jadwalka dugsiyada dadweynaha Seattle ee qoysaska leh ardayda da'doodu ka yar tahay 18 (oo ay ku jiraan carruurta xanaanada carruurta), barayaasha, iyo shaqaalaha dugsiyada.
Xaqa u lahaansho La-talinta: Kiraystayaasha Seattle oo wajahaya ka saarid aan awoodin qareenka waxay heli karaan taageero sharci oo bilaash ah Mashruuca Caddaaladda Guriyeynta (HJP).
Haddii aad hesho ogeysiis guri ka saarid ah, wac Khadka caawinta Kirada ee Seattle (206) 684-5700. Waxaan dib u eegi doonaa ogeysiiskaaga si aan u aragno haddii ay u hoggaansanto shuruucda Magaalada oo aan kuu dirno kheyraadka magaalada. Markaad soo wacdo, waxaad codsan kartaa adeegyo tarjumaad bilaash ah.
Ma dhammaatay joojintii guri ka saarista Seattle?
Joojinta guri ka saarista waxay ku egtahay Febraayo 28, 2022.
Maxaa dhici doona Febraayo 28 marka uu dhaco joojinta joogsiga guri ka saarista?
Milkiilayaasha Seattle waxaa si sharci ah loo ogolaan doonaa inay dib u bilaabaan u adeegida ogaysiisyada ka saarida kirayayaashooda iyo xaraynta ka saarida (badanaa loo yaqaan "xabbiyaasha aan sharciga ahayn") maxkamada dhexdeeda. Kiraystayaasha wali waxay leeyihiin ilaalin badan oo guri ka saarid ah waxayna xaq u leeyihiin lataliye sharci haddii aysan awoodin qareen.
Maxaan sameeyaa haddii mulkiilahaygu ii soo diro ogaysiis "14-maalmood kirada ku bixi ama Ka baxi" ama nooc kale oo ogeysiis ah?
Marka hore, wac khadka caawinta Kiraynta Magaalada Seattle ee (206) 684-5700 oo u sheeg inaad ogeysiis ka haysato mulkiilahaaga. Fadlan u sheeg xiriiriyaha haddii aad u baahan tahay turjumaan luqad gaar ah. Waxaan dib u eegi doonaa ogeysiiska si aan u hubinno inay ku jiraan dhammaan macluumaadka loo baahan yahay. Haddi ay khalad tahay, waxa aanu ka dalban doonaa mulkiilaha inuu ka noqdo. Haddii ay sax tahay, waxaanu kuu gudbin doonaa Mashruuca Caddaaladda Guriyeynta (HJP) si aad u hesho lataliye sharci.
Ma jiraan wax qorshe ah oo lacag bixin ah oo diyaar ah haddii aanan awoodin in aan bixiyo kirada?
Milkiilayaasha guryaha waxaa looga baahan yahay inay ku siiyaan qorshe lacag-bixineed oo macquul ah oo leh ogeysiis kasta oo 14-maalmood Kiro ku bixi ama Bixin ah oo ay ku adeegaan. Haddii aad ka daahdo bixinta kiradaada, waxaad leedahay difaac aad guriga ka saarida isaga difaaci karto haddii aad awoodo inaad caddeyso in dhibaatadaada dhaqaale ay sabab u tahay saameynta faafa ee COVID-19. Mashruuca Caddaaladda Guriyeynta (HJP) ayaa kaala talin kara xuquuqdaada oo ku hagi kara habka.
Ma jiraan ilaalino kale oo guri ka saarid ah?
Haa, dhammaan heshiisyada kiraynta ee Seattle waxaa nidaamiya Xeerka Sababta Ka saarida Just Cause kaas oo u baahan mulkiilaha inuu haysto mid ka mid ah 16 sababood oo gaar ah si loo joojiyo heshiiskaaga kiraynta ama diido inuu cusbooneysiiyo heshiiskaaga. Mulkiilahaagu waa inuu sheegaa sababta/sababaha gaarka ah iyo xaqiiqooyinka si ay u taageeraan ogeysiiska ay ku siiyeen. Intaa waxaa dheer, Seattle waxay leedahay difaacyo raritaan ah oo khuseeya xilliga qaboobaha (Diisambar 1 ilaa Maarso 1) ee kiraystayaasha dakhligoodu hooseeyo ee u qalma. Ilaalintan sidoo kale waxay diyaar u tahay inta lagu jiro sannad dugsiyeedka Seattle (Sebtembar ilaa Juun) qoysaska carruurta leh ee dugsiga (ay ku jiraan xannaanada ilaa dugsiga sare) iyo sidoo kale shaqaalaha iyo shaqaalaha dugsiyada.
Maxaan sameeyaa haddii layga saaro guriga, laakiin ma awoodo inaan bixiyo qareen?
Seattle waxay xaq u leedahay inay la tashato, taas oo macnaheedu yahay kirayste kasta oo loo keeno dukumeenti maxkamadeed oo loo yaqaan "u yeedhid iyo cabasho" (sidoo kale loo yaqaan "dacwad ka saarid") oo aan awoodin qareenku wuxuu xaq u leeyahay lataliye sharci oo lacag la'aan ah. Magaaladu waxay iskaashi la samaysaa Housing Justice Project (HJP) si loo hubiyo in kirayste kasta uu heli karo qareen difaaca.
Loogu talagalay Mulkiilayaasha
Caawimaad Dheeraad ah
Seattle waxay leedahay shuruudo soo jireen ah oo loogu talagalay mulkiilayaasha inta lagu jiro nidaamka guri ka saarida, waxaana si adag loogu talinayaa inaad la tashato khabiir sida qareen ama urur milkiile si aad u fahamto sharciyada hadda jira.
Caawinta Kiraystaha: Milkiile ahaan, waxaad si toos ah ula shaqayn kartaa kiraystahaaga si aad uga caawiso inay helaan agabka kaalmada kirada taasoo ka caawin karta inay ka fogaadaan dacwadaha ka saarida adag ama dheer. Ka eeg tabka "Kiraystayaasha" wixii macluumaad dheeraad ah.
Sanduuqa Mulkiilaha: Waaxda Ganacsiga ee WA waxay maamushaa barnaamijyo ka caawiya mulkiilayaasha waxyeelada iyo kirada aan la bixin.
Ururada Mulkiilaha: Ururo badan oo milkiileyaal ah ayaa leh illo iyo hagayaal ay ku helaan caawimada oo ay maraan habka ka saarida, sida Ururka Guryaynta Kirada ee WA, Ururka Guryaynta Qoysaska Badan ee Washington, iyo Caawinta Sharciga Washington.
Khayraadka Mulkiilaha: Baro xuquuqda iyo waajibaadka mulkiilayaasha Seattle.
Joojinta raritaanku ma mamnuucayaa dhammaan guri ka saarida?
Joojinta guri ka saarida COVID-19 waxay mamnuucday dhammaan raritaannada marka laga reebo kiraystaha uu khatar ku yahay caafimaadka iyo badbaadada. Tan waxa ku jira soo saarista ogaysiisyada joojinta ama ku hanjabaya in guriga laga saarayo ilaa wixii ka dambeeya Febraayo 28, 2022.
Maxaa loo arkaa khatar ku soo fool leh caafimaadka iyo badbaadada?
Khatarta dhow ayee tahay marka ay jirto hubanaan macquul ah in kiraystuhu uu khatar weyn ku yahay caafimaadka iyo badbaadada mulkiilaha, ama kiraystayaasha kale ee dhismaha. Haddii ay wax yihiin khatar soo fool leh ayaa waxaa ugu dambaynta go'aan ka gaaraya maxkamadda. Haddii aad soo saarto Ogeysiiska Joojinta 3-maalmood ee fal-dembiyeedka, waa inaad u soo dirtaa koobiga xaqiiqooyinka taageeraya SDCI si ay dib u eegis ugu sameyso una duubto wakhtiga saxda ah.
Maxaan samayn karaa marka joojinta guri ka saarrista dhamaato?
Waxaad si sharci ah dib ugu bilaabi kartaa u adeegida ogeysiisyada kiraystaha oo aad sii waddaa guri ka saarista. Hubi in guri ka saaris lagu ogol yahay sharciga Sababta ka saarida Seattle, waana inaad ku dartaa dhammaan macluumaadka iyo luqadda loo baahan yahay ogeysiiskaaga haddii kale waa la burin karaa. Waa inaad sidoo kale ogaataa ilaalin dheeraad ah, oo loogu yeero difaaca guri ka saarista, in kireystayaasha xaqa u leh ay kor u qaadi karaan nidaamka ka saarida. Waxaan kugula talineynaa inaad la tashato qareen ka hor intaadan ku dhaqaaqin tallaabo kasta oo ka saaris guri ah.
Hadda ma uga saari karaa lacag la'aan?
Waxaad u diri kartaa 14-maalmood Ogeysiis ah inaad bixiso ama uga guurto kiraystahaaga. Si kastaba ha ahaatee, kiraystahaagu wuxuu u gudbin karaa difaacooda maxkamad si looga saaro lacag-bixin la'aan sababtoo ah saameynta masiibada haddii ay aqoonsadaan dhaqaale xumo. Xusuusnow inaad ku darto bixinta qorshe lacag-bixineed ee kirada lagu leeyahay ogaysiiska. La tasho qareen sharci sida loo sii wado.
Maxay ka dhigan tahay guri ka saarista jiilaalka ee dhawaanta dhaaftay iyo ilaalinta sanad dugsiyeedka ka saarista milkiilayaasha marka joojinta COVID-19 dhamaato?
Si ka duwan joojinta guri ka saarista, sannad dugsiyeedka iyo xeerarka jiilaalka ee ku saabsan ka saarista kama horjoogsanayaan milkiilaha inuu bixiyo ogeysiis joojinta ama xereeyo maxbuus sharci darro ah (dacwadda ka saarista). Kiraystayaasha xaqa u leh waxay sare u qaadi karaan difaacooda ka saarida bilaha cimilada ugu qabow iyo inta lagu jiro sanad dugsiyeedka Seattle.
Yaa u qalma inuu kor u qaado difaacyadan ka saarista?
Kiraystayaasha aan bixin kirada inta lagu jiro cudurka faafa.
Kiraystayaasha u qalma dakhliga ee u nugul in laga saaro xilliga qaboobaha (Diisambar 1 ilaa Maarso 1).
Qoyska carruurta leh (xannaano-maalmeed ilaa dugsi sare), shaqaalaha iyo shaqaalaha taageerada dugsiyada inta lagu jiro sannad dugsiyeedka Seattle (Sebtembar - Juun).
Halkeen u raadi karaa caawimo si aan u fahmo dhammaan sharciyadan kiraynta magaalada?
Ka wac khadka caawinta Kiraynta Magaalada Seattle ee (206) 684-5700 wixii kaalmo farsamo ah. Fadlan u sheeg xiriiriyaha haddii aad u baahan tahay turjumaan luqad gaar ah. Falanqeeyayaasha u hoggaansanaanteena ayaa diyaar u ah inay kaa caawiyaan inaad ku hagto shuruudaha oo ay uga jawaabaan su'aalo kasta oo aad qabtid. Wax badan oo Ilaha mulkiilaha ayaa laga heli karaa halkan, (bogga kaliya ayaa lagu heli karaa Ingiriis).
Afeef: Macluumaadka lagu bixiyay mareegahaan maaha oo looguma talagalin inay matalaan talo sharci. Dhammaan macluumaadka, nuxurka, iyo agabka laga heli karo goobtan waxa loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad guud oo keliya.
Haddii aad hesho ogeysiis guri ka saarid ah, wac khadka caawinta kiraynta Magaalada Seattle. Fadlan u sheeg xiriiriyaha haddii aad u baahan tahay turjumaan luqad gaar ah. Waxaan dib u eegi doonaa ogeysiiskaaga si aan u aragno haddii ay u hoggaansanto shuruucda Magaalada oo aan kuu dirno kheyraadka magaalada.
Ijaarashada khadka caawinta Seattle: (206) 684-5700.
Buug-gacmeedka macluumaadka (daabacaadda)
Khayraadka la xidhiidha
Ka guurista iyo ka saarida: Wax ka baro waxa la sameeyo marka la siinayo ama la helayo ogaysiiska guuritaanka: Kiraystayaasha | Milkiilayaasha
Caawinta COVID-19 iyo Gargaarka Dhaqaale
Barnaamijyada iyo adeegyada caawiya dadka deegaanka ee sida weyn u saameeyay aafada COVID-19.
Barnaamijka Dhimista Utility
Codso qiimo dhimis xagga korontada iyo biilasha korontada.
Qorshayaasha Lacag-bixinta billka Utility: Codso qorshooyinka lacag bixinta onlayn si aad u hesho Waaxda Korontada ee Seattle iyo Adeegyada dadwaynaha ee guryaha Seattle.
Khayraadka si ay gacan uga geystaan gorgortanka iyo wax ka beddelka heshiisyada guryaha ganacsiga.
Foojarrada Doorashada Guriyeynta
Kaalmada qoysaska dakhligoodu yar yahay iyo shakhsiyaadka bixiya kirada (hore Qaybta 8).